AOLGA Timaha qalajiyaha iyo Kettle ee Qeybta Singapore
War wanaagsan! Waqtigan xaadirka ah timaha qalajiyaha iyo kettle -ka ayaa ku jira hal qol oo u dhow CBD ee Singapore. Fiiri sawirada marka hore. (AOLGA Timaha qalajiyaha RM-DF15 oo ku dhex jirta) (AOLGA Electric Kettle LL-8865 ee qolka) (sawirka jikada oo leh Aolga kettle cusub) & nbs ...
Sida Loo Sameeyo Kafee La Adeegsado Budada Kafeega ee AOLGA Machine Coffee AC-514K
1. Fur gacanka-Ka soo bixi dambiisha wax soo saar ee kaabsoosha Dolce-Gusto. tani waa waxqabad caadi ah. 2. Riix budada kafeega ...
Sida Loo Adeegsado AOLGA Capsule Coffee Machine AC-514K
Kafeega cusub oo kulul ayaa kiciya maskaxdaada wuxuuna siinayaa nasasho degdeg ah hal maalin mashquul ah. Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad ku raaxaysato qaxwadaada, tallaabada ugu horreysa ayaa ah inaad baratid sida habboon ee AOLGA Capsule Coffee Machine AC-514K 1 Fur gacanka-Soo jiid dambiisha wax lagu karsado ee kaabsoosha Nespresso, oo ...
Aolga Steam Iron ee Wax soosaarka
Birtayada cusub ee la soo saaray ee wax soo saarka Shaqaalahayagu waxay ku mashquulsan yihiin khadka wax soo saarka si ay u soo saaraan birta uumiga ah Waxaad ka heli kartaa qaar ka mid ah sawirrada wax soo saarka. (shaqaalahayagu waxay isku ururinayaan biraha guduudka ah) Muddadan waxaan aad ugu mashquulsanahay soo -saarkan birta maxaa yeelay taariikhda dhalmadu waa maalmo yar.
Xirfaddu waxay ka dhigtaa Guul
Maanta, waxaan jeclaan lahaa inaan ku tuso agagaarkaaga si aan wax badan nooga ogaano. Xafiisyo ku leh HK, Shenzhen iyo Shanghai, AOLGA waxay ku leedahay warshadaha iyo bakhaarrada gobolka Guangdong. Midka ugu horreeya ee aan rabno inaan wadaagno waa khadka wax soo saarka timaha qalajiyaha. Sawirkaan kore, waxaad ka heli kartaa saddexda timo ee ugu waaweyn ...